မုနျတိုငျးတဈလုံး မလေတတိယပတျမှာ ဖွဈပျေါလာနိုငျ - Cele Fans
HomeLocal Newsမုနျတိုငျးတဈလုံး မလေတတိယပတျမှာ ဖွဈပျေါလာနိုငျ
May 16, 2021 Cele Fans Local News Comments Off on မုနျတိုငျးတဈလုံး မလေတတိယပတျမှာ ဖွဈပျေါလာနိုငျ
ကပ်ပလီပငျလယျပွငျနဲ့ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတို့မှာမွနျမာနိုငျငံအပျေါ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိနိုငျသောမုနျတိုငျးတဈလုံး မလေတတိယပတျမှာ ဖွဈပျေါလာနိုငျတယျလို့ ပွီးခဲ့တဲ့ဧပွီလမိုးကွို/မိုးဦးခနျ့မှနျးခကျြမှာ ကွိုတငျထုတျပွနျပေးခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။
ယခငျ ခနျ့မှနျးခကျြထကျ၃ရကျလောကျနောကျကပြွီးမှဖွဈလာမှာမို့ အနီးကပျupdateသတငျး ထပျမံထုတျပွနျပေးခွငျးသာ ဖွဈပါတယျ။
ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတောငျပိုငျး ကိုကိုးကြှနျး၏အနောကျဘကျတှငျ ယခုမလေ ၂၂-၂၃ရကျနတှေ့ငျ လထေုမငွိမျသကျမှုဖွဈပျေါလာရာမှ မလေ ၂၄ နတှေ့ငလဖေိအားနညျးရပျဝနျးတဈခု အဖွဈသို့ရောကျရှိလာနိုငျပါတယျ။
အဆိုပါလဖေိအားနညျးရပျဝနျးဟာ ဆကျလကျအားကောငျးလာပွီး မလေ ၂၅ရကျနမှေ့ာ မုနျတိုငျးအဖွဈသို့ ရောကျရှိလာနိုငျတယျလို့ခနျ့မှနျးတှကျခကျြရရှိထားပါတယျ။
မုနျတိုငျးလမျးကွောငျးလမျးကွောငျးအနနေဲ့ကတော့ မွောကျ(သို့)အနောကျ-မွောကျဘကျ ဘင်ျဂလားဒရျေှ့ရဲ့ အရှတေ့ောငျဘကျကိုဦးတညျရှလြေ့ား သှားနိုငျတယျလို့တော့ ကနဦး ခနျ့မှနျးပါတယျ။
ယခုဖွဈပျေါလာမဲ့မုနျတိုငျးဟာ စုဖှဲ့မှု၊ ရဈခှမှေုနှငျ့ ရငှေပေ့ါဝငျမှုတှကေ အားကောငျးနိုငျတော့ မုနျတိုငျးဖွတျသနျးရာလမျးကွောငျးတဈလြောကျမှာ အဖကျြစှမျးအားကွီးမားနိုငျလို့ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုအားနညျးရငျတော့အပကျြအစီးမြားနိုငျပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ မွနျမာ့ပငျလယျပွငျမှ ရလေုပျသားမြားသတိထားသငျ့ပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံ အပျေါအကြိုးသကျရောကျမှုမွနျမာနိုငျငံအပျေါ အကြိုးသကျရောကျမှုအနနေဲ့ကတော့မလေ ၂၅မှ ဇှနျ ၂ရကျနအေ့တှငျး မွနျမာနိုငျငံတဈခုလုံးနရောကြဲကြဲမှ နရောစိပျစိပျ မိုးထဈခြုနျးရှာသှနျးပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ရခိုငျပွညျနယျ၊ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးတို့မှာ နရောကှကျပွီး မိုးကွီးနိုငျတယျလို့အထိတောငျ ခနျ့မှနျးတှကျခကျြရရှိထားပါတယျ။
ပွီးခဲ့အပတျစဉျခနျ့မှနျးခကျြမှာ ကွိုတငျခနျ့မှနျးခဲ့တဲ့အတိုငျးမွနျမာနိုငျငံအလယျပိုငျးအပါအဝငျ မိုးနညျးဒသေအခြို့မှာအခုရကျပိုငျးထဲ မိုးပွတျပွီးနအေ့ပူခြိနျမြားတိုးနနေိုငျပါတယျ။
သို့သျော ယခငျအကွံပွုထားတဲ့အတိုငျး စိုကျပြိုးရေးပွုလုပျမညျ့ တောငျသူမြားအနဖွေငျ့ မိုးနညျးခြိနျတှငျထယျရေးပွငျထားကွဖို့ကိုလဲ ဆကျလကျ အကွံပွုတငျပွလိုပါတယျ။
လာမညျ့မလေ ၂၅မှ ဇှနျလ၂ရကျနအေ့တှငျးမွနျမာနိုငျငံတဈခုလုံး မိုးရှာသှနျးဖို့ရှိတော့ ထယျရေးအောကျခြိနျမိုးရှာသှနျးလာပါက အခြိနျမီအသငျ့စိုကျပြိုးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ မွနျမာ့ပငျလယျပွငျဖွဈတဲ့ မုတ်တမကှေ့၊ရခိုငျ၊မှနျ-တနင်ျသာရီကမျးရိုးတနျး တဈလြှောကျနှငျ့ကမျးလှနျပငျလယျပွငျတို့တှငျ တဈခါတဈရံ လပွေငျးမြားတိုကျခတျပွီးလှိုငျးအသငျ့အတငျ့မှ လှိုငျးကွီးနိုငျလို့ ရလေုပျသားမြားပငျလယျပွငျတှငျခုတျမောငျးသှားလာနသေော လှနှေငျ့သင်ျဘောမြားအဆိုပါရကျတှမှော သတိထားငျ့ကွောငျးအကွံပွုတငျပွလိုပါတယျ။
အုပျလုပျငနျးလုပျကိုငျနသေူမြား၊ ဆားလုပျငနျးလုပျကိုငျနသေူမြားအနဖွေငျ့လဲ ရာသီဥတု အခွအေနမြေားကိုကွိုတငျသိရှိနားလညျပွီး မိမိတို့ရဲ့ လုပျငနျးလိုအပျခကျြမြားအပျေါမှုတညျပွီး လိုအပျသလိုဆကျလကျလုပျဆာငျနိုငျအောငျ ကွိုတငျခနျ့မှနျးထုတျပွနျ တငျပွပေးလိုကျရပါတယျ ခငျဗြာ။
မိုးလဝေသဖွဈစဉျမြားသညျ အခြိနျနှငျ့အမြှ ပွောငျးလဲနသေောကွောငျ့ အပွောငျးအလဲအနညျးငယျရှိနိုငျလို့ကြှနျတျောရဲ့နစေ့ဉျသတငျးထုတျပွနျခကျြမြား၊အနီးကပျUpdateသတငျးခနျ့မှနျးခကျြမြားနှငျ့ မိုးလဝေသနှငျ့ဇလဗညှေနျကွားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ တရားဝငျထုတျပွနျခကျြမြားကိုသာစောငျ့ကွညျစလေိုပါတယျ။
ကြှနျတျောတငျပေးနသေော မိုးလဝေသ နစေ့ဉျခနျ့မှနျးခကျြ အပတျစဉျနှငျ့ လစဉျကဲ့သို့သော ရကျဝေးခနျ့မှနျးခကျြမြားကို အမွဲတမျးဖတျရှုလိုပါကကြှနျတျောအကောငျ့
ကိုFollowedလုပျထားခွငျး နှငျ့ See First လုပျထားခွငျးတို့ဖွငျ့ ကြှနျတျောသတငျးတငျပေးလိုကျတိုငျးမွငျတှရေ့နိုငျမှာ ဖွဈပါတယျခငျဗြာ။
တောငျသူဦးကွီးမြားလဲ သီးနှံးပငျမြားအထှကျတိုးပွီး မွကွေီးကရှသေီးသလို အောငျမွငျဖွဈထှနျးပွီး တိုးတကျ ကွီးပှားကွပါစေ….
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောမုန်တိုင်းတစ်လုံး မေလတတိယပတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမိုးကြို/မိုးဦးခန့်မှန်းချက်မှာ ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် ခန့်မှန်းချက်ထက်၃ရက်လောက်နောက်ကျပြီးမှဖြစ်လာမှာမို့ အနီးကပ်updateသတင်း ထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း ကိုကိုးကျွန်း၏အနောက်ဘက်တွင် ယခုမေလ ၂၂-၂၃ရက်နေ့တွင် လေထုမငြိမ်သက်မှုဖြစ်ပေါ်လာရာမှ မေလ ၂၄ နေ့တွငလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ ဆက်လက်အားကောင်းလာပြီး မေလ ၂၅ရက်နေ့မှာ မုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရရှိထားပါတယ်။
မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကတော့ မြောက်(သို့)အနောက်-မြောက်ဘက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက်ကိုဦးတည်ရွေ့လျား သွားနိုင်တယ်လို့တော့ ကနဦး ခန့်မှန်းပါတယ်။
ယခုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မုန်တိုင်းဟာ စုဖွဲ့မှု၊ ရစ်ခွေမှုနှင့် ရေငွေ့ပါဝင်မှုတွေက အားကောင်းနိုင်တော့ မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းရာလမ်းကြောင်းတစ်လျောက်မှာ အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားနိုင်လို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနည်းရင်တော့အပျက်အစီးများနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှ ရေလုပ်သားများသတိထားသင့်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေ့နဲ့ကတော့မေလ ၂၅မှ ဇွန် ၂ရက်နေ့အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနေရာကျဲကျဲမှ နေရာစိပ်စိပ် မိုးထစ်ချုန်းရွာသွန်းပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ နေရာကွက်ပြီး မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အထိတောင် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရရှိထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့အပတ်စဉ်ခန့်မှန်းချက်မှာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအပါအဝင် မိုးနည်းဒေသအချို့မှာအခုရက်ပိုင်းထဲ မိုးပြတ်ပြီးနေ့အပူချိန်များတိုးနေနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် ယခင်အကြံပြုထားတဲ့အတိုင်း စိုက်ပျိုးရေးပြုလုပ်မည့် တောင်သူများအနေဖြင့် မိုးနည်းချိန်တွင်ထယ်ရေးပြင်ထားကြဖို့ကိုလဲ ဆက်လက် အကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်။
လာမည့်မေလ ၂၅မှ ဇွန်လ၂ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံး မိုးရွာသွန်းဖို့ရှိတော့ ထယ်ရေးအောက်ချိန်မိုးရွာသွန်းလာပါက အချိန်မီအသင့်စိုက်ပျိုးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်ဖြစ်တဲ့ မုတ္တမကွေ့၊ရခိုင်၊မွန်-တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ လေပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီးလှိုင်းအသင့်အတင့်မှ လှိုင်းကြီးနိုင်လို့ ရေလုပ်သားများပင်လယ်ပြင်တွင်ခုတ်မောင်းသွားလာနေသော လှေနှင့်သင်္ဘောများအဆိုပါရက်တွေမှာ သတိထားင့်ကြောင်းအကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်။
အုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများ၊ ဆားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများအနေဖြင့်လဲ ရာသီဥတု အခြေအနေများကိုကြိုတင်သိရှိနားလည်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအပေါ်မှုတည်ပြီး လိုအပ်သလိုဆက်လက်လုပ်ဆာင်နိုင်အောင် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထုတ်ပြန် တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ရှိနိုင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၊အနီးကပ်Updateသတင်းခန့်မှန်းချက်များနှင့် မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုသာစောင့်ကြည်စေလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တင်ပေးနေသော မိုးလေဝသ နေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက် အပတ်စဉ်နှင့် လစဉ်ကဲ့သို့သော ရက်ဝေးခန့်မှန်းချက်များကို အမြဲတမ်းဖတ်ရှုလိုပါကကျွန်တော်အကောင့်
ကိုFollowedလုပ်ထားခြင်း နှင့် See First လုပ်ထားခြင်းတို့ဖြင့် ကျွန်တော်သတင်းတင်ပေးလိုက်တိုင်းမြင်တွေ့ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
တောင်သူဦးကြီးများလဲ သီးနှံးပင်များအထွက်တိုးပြီး မြေကြီးကရွှေသီးသလို အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းပြီး တိုးတက် ကြီးပွားကြပါစေ….
ဘာကွောငျ့ဘဏျထဲကငှတှေေ ပွနျထုတျသငျ့သလဲဆိုတာ ဘဏျဝနျထမျးဟောငျးတဈဦးရဲ့ ပွောကွားခကျြ